Posted on Waxaa laga yaabaa 20, 2022 Waxaa laga yaabaa 20, 2022 by Fei (aasaasaha)
3 NORD SUD Dhoofinta FZC
5 Aukuras Credence - Iibiyeyaasha Dharka Gacmaha ee Qubrus
6 Alaab-qeybiyeyaasha Dharka Gacanta Labaad ee Qubrus Gabagabada
Magacyo dhowr ah ayaa soo baxay marka ay timaado helitaanka kan ugu fiican alaab-qeybiyeyaal dhar-gacan- labaad ah Qubrus. Maqaalkani waxa uu eegi doonaa 5-ta ugu sarreeya ee alaab-qeybiyeyaasha ugu caansan dharka la isticmaalay Qubrus. Haddi aad u raadinayso dhar la isticmaalay meheraddaada ama jumlo ahaan, alaab-qeybiyeyaashani waxay heli doonaan waxaad u baahan tahay. Haddaba, annagoon hadal dheerad ah lahayn, aynu eegno 5-ta ugu sarreeya ee ugu caansan alaab-qeybiyeyaasha dharka gacanta labaad Qubrus!
Hissen Global waxa uu hormuud u ahaa dhoofinta dharka gacan labaad tan iyo 2012. Hal-abuuro ganacsi oo khibrad leh ayaa dhidibada u taagay shirkadda, waxaanay haystaan ​​agab aad u badan oo ay ku ururiyaan dharka la isticmaalay.
Silsiladdooda sahayda iyo nidaamka qaybinta ma aha oo kaliya mid xasilloon laakiin sidoo kale muhiim ah, waxay haystaan ​​70,000 dhibcood ururinta iyo dib u warshadaynta adag ee gelitaanka. dadka waaweyn iyo carruurta ama arrimo kale oo ganacsi.
Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato macluumaadkooda gaarka ah ama buug-yaraha alaabta, booqo shabakadooda!
FHUMERKURYW waa dhoofiye ku hawlan ganacsiga jumlada ee dharka la isticmaalay, oo la aasaasay 2022. Inkasta oo shirkadu ay weli da' yar tahay, faa'iidada suurtagalka ah ayaa ka dhigaysa inay ka dhex muuqdaan tartamayaasheeda.
Shirkaddu waxay ka keentaa dharka gacan labaad oo tayo sare leh oo keliya meelaha kobaca dhaqaalaha sare ka jiro. Goobaha ay ku yaalaan ururinta dharka la isticmaalay waxay keentaa xidhiidh aaminaad ah oo ay la leeyihiin boqolaal ka mid ah iibiyeyaasha dharka gacan labaadka ah.
Natiijo ahaan, FHUMERKURYW waxay awooday inay bataan oo hadda u dhoofiso dharka la isticmaalay in ka badan 20 waddan oo adduunka ah. Shirkadda waxaa ka go'an in ay macaamiisheeda u soo bandhigto dhar la isticmaalay oo tayo sare leh oo qiimo jaban ah waxayna sii waddaa raadinta habab cusub oo ay ku horumariso adeeggeeda.
NORD SUD Dhoofinta FZC
NORD SUD Dhoofinta FZC waa alaab-qeybiye la isticmaalay oo ku takhasusay jumlada dharka gacanta labaad. Shirkadda ayaa la aasaasay sannadkii 1985, oo ku yaalla dalka Imaaraadka Carabta, Nidaamkooda hawlgalku wuxuu isku daraa sahay isku dhafan.
Shirkaddu waxay ku siin kartaa noocyo kala duwan oo dhar la isticmaalay. Marka laga reebo A ilaa C Fasalka waxa loo tixgalin karaa in uu yahay shay la isticmaalay oo u qalma, dunta kale sida calaladaha waxa loo isticmaali karaa sida calal warshadeed oo lagu nadiifiyo mishiinada ama alaabta aan codka lahayn.
NORD SUD Dhoofinta wax-soo-saarkiisu waa dib-u-isticmaalka, yaraynta, dib u warshadaynta. Hadafka iyo ujeeddadoodu waa inay dhisaan xidhiidh wakhti dheer ah oo ay la yeeshaan macaamiishooda adduunka.
VITTO' GROUP SRL waa dhoofiye ku takhasusay ganacsiga jumlada dharka la isticmaalay ee gudaha Talyaaniga. Shirkadda ayaa la aasaasay sannadkii 1990 waxayna dhistay aasaas wanaagsan oo ay la leedahay dalal dhowr ah oo ku yaala suuqa dharka labaad.
Shirkaddu waxay leedahay 2 goobood oo kala-soocidda oo midkiiba dhan yahay 6,000 oo mitir oo laba jibbaaran, shaqaale khibrad leh ayaa si taxaddar iyo xeel-dheer u baadha dhar kasta oo la isticmaalo. Waxay bixiyaan xulashooyin badan oo taxane ah, sida dharka la isticmaalay, kabaha gacanta labaad, iyo qalabyada kale.
Aragtida shirkadu waa in ay dhisto nidaam alaab-qeybiyeyaal caalami ah oo la isticmaalo.
Aukuras Credence - Iibiyeyaasha Dharka Gacmaha ee Qubrus
Aukuras Credence waa alaab-qeybiye gacan labaad ah oo dib u warshadaynaysay dharka la isticmaalay in ka badan 10 sano, oo fadhigeedu yahay Ireland. Markii hore, shirkadu waxay ku bilowday ganacsi yar oo dhar ah oo la isticmaalo.
Dharka la isticmaalo ee Aukuras waxaa laga eegaa burbur, jeexjeex, ama wasakh. Dhammaan dharka la isticmaalo waxaa lagu kala soocaa nooc, iyo midab, jeeg random ah oo la hirgeliyay inta lagu jiro habka soo saarista, oo si wanaagsan loo soo raray ka dibna si caalami ah loo raray.
Shirkaddu waxay rabta inay bixiso badeecooyin tayo sare leh iyo adeegga macaamiisha ugu wanaagsan, iyadoo si dhow ula shaqaynaysa la-hawlgalayaasha ganacsiga ee adduunka, waxayna raadinayaan iskaashi waqti dheer ah xiriir kasta.
Alaab-qeybiyeyaasha Dharka Gacanta Labaad ee Qubrus Gabagabada
Haddii aad raadinayso qof sumcad leh oo la isku halayn karo alaab-qeybiyaha dharka gacanta labaad Qubrus, shanta meherad ee kor ku taxan waa inay noqdaan kuwa aad dooranayso. Mid kasta oo ka mid ah alaab-qeybiyeyaashan waa la shaandheeyay oo si heer sare ah loogu taliyey, si aad u hubiso inaad ogtahay inaad la macaamilayso shirkad la aamini karo. Horay ma u isticmaashay mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaashan? Noogu sheeg faallooyinka hoose sida waayo-aragnimadaada u dhacday.
Views Views: 25
Entry waxa loo posted in Wararka Hissen iyo tagged hissen, 5-ta ugu Sarreysa ee ugu Caansan Dharka Labaad ee Qubrus.
2 fikradaha ah5-ta ugu Sarreysa ee ugu Caansan Dharka Labaad ee Qubrus"
q wuxuu leeyahay,
Waxaan booqday dhowr baloog marka laga reebo tayada maqalka ee heesaha maqalka ah ee goobtan waa
runtii aad u fiican.
June 7, 2022 at 2: am 17
zoritoler imol wuxuu leeyahay,
Hagaag runtii waxaan jeclaa inaan barto. Tilmaamahan aad bixisay waa mid aad waxtar u leh qorsheynta saxda ah.
June 25, 2022 at 1: am 59